2018 – Simple Khabar
पोखरामा दिउसै झाडीभित्र यस्तो गरेको भेटियो , गर्दा गर्दै यसरी समात्यो पुलिसले (हेर्नुहोस यो भिडियो )
On December 31, 2018 By simplekhabar
पोखराको एक ठाउँमा एक जोडी दिउसै झाडीमा लुकेर रसलिला गर्न लागेका बेला कास्की प्रहरीले समातेको छ । आफ्नै तालमा झाडीमा रोमान्स गरिरहेको बेला बटुवाहरुले देखेका थिए उनीहरु दुवै बिबाहित भएको बुझिएको छ । हेर्नुहोस कस्तो […]
यौन जिज्ञासा समाचार समाजLeaveacomment
दाङ पुगेर प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीले गरे यस्तो गज्ज़बको काम ,दंगालिलाई यसरि खुसि बनाउदै
पुस १६, दाङ ।बिहान १० बजेको थियो । अन्य दिनजस्तै आज पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ मा रहेको मावि कालाखोलाका विद्यार्थी प्रार्थना गरिरहेका थिए । त्यतिबेला प्रदेश नं– ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार वली, […]
के हुदै छ ? पोखरामा महिलाले आफैँलाई आगो लगाईन् ,चक्लेटको प्रलोभनमा पारी २२ वर्षीय युवकद्वारा पाँच वर्षीया बालिका बलात्कार
पोखरा पुस १६ , । पोखराको पृथ्बीचोकमा एक महिलाले आफैंलाई आगो लगाएकी छन् । आफ्नो शरिरमा आफैंलाई आगो लगाएकी महिलालाई उपचारका लागि पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता […]
महिला कामदारसँग यौन सम्पर्क गर्दा लिङ्ग योनीमै अड्किएपछि,मच्चियो उत्पात
महिला कामदारसँग यौन सम्पर्क गर्दा लिङ्ग योनीमै अड्किएपछि,मच्चियो उत्पात केन्यामा एउटा अचम्मको घटना सार्वजनिक भएको छ । यस घटनाबारे थाहा पाउने मानिसहरू अचम्ममा परे । महिला कामदारसँग यौन सम्पर्क गर्दा लिङ्ग योनीमै अड्कियो,मच्चियो उत्पात । […]
काठमाडौँबाट सुर्खेत जाँदै गरेको बस दुर्घटना ३५ जना यात्रु जसमध्ये ६ जना ………
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको दासढुङ्गामा गएराति बस र ट्रक ठोक्किँदा बसमा सवार १९ यात्रु घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार काठमाडौँबाट सुर्खेत जाँदै गरेको ना ५ ख ८०४४ नं को बस र […]
नयाँ वर्षमै ३०० नयाँ विद्युतीय बस चलाउने सरकारको योजना
काठमाडौं १६,पुस । सरकारले नयाँ विद्युतीय बस आगामी वैशाखबाटै चल्ने बताएको छ । संसदको विकास समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले आगामी बैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय विद्युतीय बस गुड्ने […]
यौन जिज्ञासा- किन गाह्रो भएको ? कसरी आनन्दसँग सम्पर्क गर्ने ?
कार्तिक १५, २०७५ इन्द्रियहरूवाट ग्रहण गरेका सन्देश मस्तिष्कसम्म पुगेपछि चेतन रूपमा हामीले उक्त कुरा थाहा पाउँछौं । विभिन्न अङ्ग (स्रोत) बाट सन्देशहरू स्नायु प्रणालीका नसाहरूबाट विद्युतीय तरंग वा रसायनहरूको माध्यमवाट मस्तिष्कसम्म पुग्छन् र त्यसलाई मस्तिष्कले […]
मोदीलाइ सुरक्षा दिन खटिएका प्रहरीलाई स्थानीयले ढुंगा हानेर मारिदिए
याँ दिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सभालाई सुरक्षा दिन गएका एक प्रहरी अधिकारीकाे मृत्यु भएकाे छ । स्थानीय प्रदर्शनकारीले ए प्रहार गर्दा माेदीकाे सभालाई सुरक्षा दिन गएका प्रहरी सुरेश वत्सकाे मृत्यु भएको हाे । […]